Mareykanka oo Xayiraad kusoo rogay Taliyaha Ciidamada Eritrea & kaalintii Dagaalka Tigray oo loo heysto - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Mareykanka oo Xayiraad kusoo rogay Taliyaha Ciidamada Eritrea & kaalintii Dagaalka Tigray oo loo heysto - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad kusoo rogtay Taliyaha Ciidamada dalka Eritrea loo heysto kaalintii uu ku lahaa tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.
Wasaaradda Maaliyadda Mareyanka, Xafiiskeeda Kontoroolka Hantida Dibadda (OFAC) ayaa cunaqabateyn dhaqaale iyo mid socdaal ku soo rogtay General Filipos Woldeyohannes, Taliyaha Ciidanka Difaaca Eritrea (EDF), kadib markii lagu eedeeyay inuu noqday sarkaal hay’ad ku hawlan tacaddiyo ba’an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalka Gobolka Tigray.
Go’aanka dowlada Mareykanka xayiraada ku saartay Gen. Filipos ayaa loo cuskaday Amarka Fulinta (E.O.) 13818, kaas oo ku dhisan La -xisaabtanka Xuquuqda Aadanaha ee ‘Magnitsky Global’ oo lagu beegsado kuwa geysta xad-gudubyada daran ee xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa adduunka oo dhan.
“Waaxda Maaliyaddu waxay sii wadi doontaa inay tallaabo ka qaaddo kuwa ku lugta leh xadgudubyada culus ee xuquuqda aadanaha ee adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan gobolka Tigray ee Itoobiya, halkaas oo falalka noocan oo kale ah ay uga sii darayaan colaadda socota iyo dhibaatooyinka bani’aadamnimada,” ayuu yiri Agaasimaha Xafiiska Hantida Dibadda Andrea M. Gacki.
Tallaabada maanta ayaa muujineysa sida Mareykanka ay uga go’an tahay inay xayiraad ku soo rogo kuwa mas’uulka ka ah falalkan sii xoojinaya dagaallada ee horseeday inay Itoobiya ka dhacaan dhibaatooyin aad u weyn.
Waxay ugu baaqeen Eritrea inay si degdeg ah ciidamadeeda ugala baxdo Itoobiya, ayna dhinacyada isku haya inay billaabaan wadaxaajoodka xabbad-joojinta, si loo joojiyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Previous articleKulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socda Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Midowga Musharixiinta
Next articleDowladda Eritrea oo si kulul uga jawaabtay Xayiraad Mareykanku kusoo rogay Taliyaha Ciidamadeeda